Nhau - Butterfly vheji bvunzo uye yekumisikidza nzira dzekugadzirisa
Butterfly vharafu bvunzo uye yekumisikidza yekugadzirisa nzira
Butterfly vharafu bvunzo uye kugadzirisa:
1. Iyo vharuvhu vharuvhu ibhuku remanyowani, pneumatic, hydraulic, uye magetsi chinhu icho chakanyatso kugadziriswa usati wabuda mufekitori. Kana uchitarisa kuita kwekuisa chisimbiso, mushandisi anofanira zvakaenzana kugadzirisa mativi ese ekupinda nekubuda, vhara vharuvhu, uye woisa kumanikidza kune yekupinda. Tarisa uone kana paine chero kuvhuvhuta padivi rekubuda. Pamberi pesimba rekuyedzwa kwepombi, ndiro yedhishi inofanira kuvhurwa kudzivirira kukanganisa kune vaviri vanoisa chisimbiso.
2. Kunyangwe hazvo Diyue yakaongororwa zvakanyanya uye kuyedzwa isati yasiya fekitori, kune zvekare zvimwe zvigadzirwa zvinoshandura zvadzo nzvimbo dzekumusoro panguva yekufambisa, zvinoda kugadziridzwa, pneumatics, hydraulics, nezvimwe, ndapota tarisa kune yekuraira kwekushandisa kweinotsigira dhiraivhu dhiraivhu. .
3. Mavhiri ekuvhura nekuvhara emagetsi ekugadzirisa akagadziridzwa kana vharuvhu yemagetsi ikasiya fekitori. Kuti udzivise nzira isiriyo kana magetsi avhurwa, mushandisi anotanga kubatidza magetsi zvine mwero kusvika pahafu-yakavhurika chinzvimbo mushure mekubatidza magetsi kekutanga, wobva wadzvanya switch yemagetsi kuti uone kuti iyo chinongedzo ndiro inoenderana neyakavhara nzira yevhavha.
2. Zvakajairika zvikanganiso uye nzira dzekubvisa dzemavharufuru mavharuvhu:
1. Usati waisa vharuvhu bhatafuru, simbisa kana mashandiro evharufuru vharuvhu uye museve wepakati wekuyerera nzira inoenderana nemamiriro ekufambisa, uye mhango yemukati yevhavha yeGuilong inofanira kuiswa nekucheneswa. Izvo hazvibvumidzwe kuve nevekunze nyaya yakasungirirwa kumhete yekuisa chisimbiso uye ndiro yefurifura. Hazvibvumirwi kuvhara ndiro yefurufuru kuti idzivise kukuvadzwa kweringi.
2. Inokurudzirwa kushandisa yakakosha flange yevhavhavhavhavuruvuru, ndiko kuti, HGJ54-91 mhando socket welding simbi flange yekumisikidza disc disc.
3. Nzvimbo yakanakisa yekumisikidza vharuvhu vharuvhu kuisirwa pairi, asi kwete kumisikidzwa-kumusoro.
4. Kuyerera kwevhavhavhavuruvuru kunoda kugadziriswa panguva yekushandisa, uye inodzorwa nehonye giya bhokisi.
5. Kune vharuvhu yedisk ine nhamba yakakura yekuvhura nekuvhara nguva, vhura iyo honye giya bhokisi rekuvhara mukati memwedzi miviri kuti utarise kana bhotoro rakajairika. Chengeta huwandu hwakaringana hweta.
6. Tarisa kuomarara kwechikamu chega chega chekubatanidza, icho chisingangovimbise hunhu hwakaita kunge hwenyuchi hwekurongedza, asi zvakare hunovimbisa kutenderera kwakasanduka kwevhavha yevhavha.
7. Zvigadzirwa zvesimbi-yakavharidzirwa butterfly vharuvhu zvigadzirwa hazvina kukodzera kumisikidzwa panopera pombi. Kana ichifanira kuiswa panopera pombi, inoburitsa flange inofanirwa kuiswa kudzivirira iyo ringi yechisimbiso kubva pakutsikirirwa zvakanyanya uye nekumisikidzwa-pamusoro.
8. Valve stem kumisikidza uye shandisa mhinduro Nguva nenguva tarisa iko kushanda kwevhavha, uye nekukurumidza bvisa chero zvikanganiso zvakawanikwa.
3. Maitiro ekumisa panguva yakakodzera ekukanganisa angangoitika anotsanangurwa mune inotevera tafura: Zvinogona kuitika zvikonzero zvekutadza kubvisa nzira Kuisa chisimbiso pamusoro pekupunzika 1. Ndiro yefurufufuru uye yekuvhara chisimbiso zvine marara.
2. Nzvimbo yekuvhara yeplate butterfly uye yekuisa chisimbiso pamusoro hazvina kunaka
3. Rutivi rwekuburitsa rwakagadzirwa nemabhaudhi emagetsi asina kumanikidzwa kana kuti kwete zvinoenderana nezvinodiwa neMufananidzo 1. Nhungamiro yemuedzo wekumanikidza haisi maererano nezvinodiwa neMufananidzo 1.
1. Bvisa tsvina uye uchenese mukati memukati wevhavha
2. Gadzirisa iyo yekugadzirisa sikuruu yehonye giya kana yemagetsi actuator kuti uwane chaiyo yekuvhara nzvimbo yevhavha. 3. Tarisa iyo inokwira flange ndege uye bhaudhi inosimbisa nyika. Vanofanira kunge vakasimbiswa zvakaenzana.
4. Dhinda munzira yekumusoro kwetiki chisimbiso
5. Kuvuza pamativi ese evhavha:
1. Kuiswa chisimbiso kwemaseketi pamativi ese maviri kunotadza
2.Ineven kana isina kumanikidzwa pombi flange kuomarara
3. Iwo ekumusoro uye ezasi ekuisa chisimbiso magasketi echisimbiso mhete haashande. 1. Tsiva chisimbiso gasket. 2. Sunga bhaudhi flange (kunyange simba). 3. Bvisa ringi yekumanikidza yevhavha uye kutsiva iyo yekuisa chisimbiso. Iyo yakakundikana gasket